४ त्यसो हो भने हामी अब्राहामबारे के भनौं, जो शारीरिक नातामा हाम्रा पुर्खा थिए? २ उदाहरणका लागि, अब्राहामलाई कामहरूको आधारमा असल ठहराइएको भए तिनीसित घमन्ड गर्ने कारण हुनेथियो तर परमेश्‍वरसामु त होइन। ३ किनकि धर्मशास्त्रको एउटा अंशले के भन्छ? “अब्राहामले यहोवामा विश्‍वास गरे र यसले गर्दा तिनी उहाँको नजरमा असल ठहरिए।” ४ जसले काम गर्छ, त्यस मानिसले पाउनुपर्ने ज्यालालाई असीम अनुग्रहको रूपमा नभई उसलाई तिर्नुपर्ने ऋणको रूपमा हेरिन्छ। ५ अर्कोतर्फ, जसले काम गर्दैन तर पापीहरूलाई असल ठहराउनुहुनेमाथि विश्‍वास राख्छ, उसको विश्‍वासैले उसलाई असल ठहराउँछ। ६ जस्तो कि दाऊदले पनि यस्तो मानिसको आनन्दबारे चर्चा गरेका छन्‌, जसलाई कामै नगरे तापनि परमेश्‍वरले असल ठहराउनुहुन्छ: ७ “आनन्दित हुन्‌ तिनीहरू, जसका कुकर्महरू क्षमा भएका छन्‌ र जसका पापहरू ढाकिएका छन्‌। ८ आनन्दित हो त्यो मानिस, जसको पापको लेखा यहोवाले कुनै हालतमा राख्नुहुनेछैन।” ९ त्यसोभए, यो आनन्द खतना भएका मानिसहरूले मात्र पाउँछन्‌ कि खतना नभएका मानिसहरूले पनि? किनकि हामी भन्छौं: “तिनको विश्‍वासले गर्दा अब्राहाम उहाँको नजरमा असल ठहरिए।” १० त्यसोभए, तिनी कुन अवस्थामा असल ठहरिएका थिए? खतना भएपछि कि खतना हुनुअघि? खतना भएपछि होइन, खतना हुनुअघि नै। ११ अनि खतना नभएकै अवस्थामा तिनले देखाएको विश्‍वासले गर्दा तिनी असल ठहरिएका हुन्‌ भन्‍ने कुराको पुष्टिस्वरूप तिनले एउटा चिन्ह पाए, जो खतना थियो। यसरी, खतना नभए तापनि विश्‍वासले गर्दा असल ठहरिएकाहरू सबैको तिनी बुबा बने; १२ साथै, खतना गरिएका सन्तानहरूको पनि। तिनी खतना भएकाहरूको मात्र होइन तर खतना हुनुअघि हाम्रा बुबा अब्राहामसित जुन विश्‍वास थियो, त्यसको पदचिन्हमा हिंड्‌ने सबैको पनि बुबा बने। १३ अब्राहाम वा तिनको वंशले व्यवस्था पालन गरेकोले संसारको उत्तराधिकारी हुने प्रतिज्ञा पाएको होइन तर विश्‍वासद्वारा असल ठहरिएकाले पाएको हो। १४ यदि व्यवस्थाअनुसार चल्नेहरू नै उत्तराधिकार हुन्छन्‌ भने त विश्‍वास बेकामको हुन्छ र प्रतिज्ञा रद्द हुन्छ। १५ वास्तवमा, मोशाको व्यवस्थाले क्रोध उत्पन्‍न गर्छ तर जहाँ व्यवस्था हुँदैन, त्यहाँ अपराध पनि हुँदैन। १६ यसकारण, विश्‍वास देखाएको हुनाले तिनले यो प्रतिज्ञा पाएका हुन्‌। परमेश्‍वरको असीम अनुग्रह प्रकट होस्‌ र मोशाको व्यवस्थाअनुसार चल्नेहरूलाई मात्र होइन तर अब्राहामको जस्तो विश्‍वास हुने तिनका सबै सन्तानलाई पनि यो प्रतिज्ञा पक्का होस्‌ भनेर यो हुनआएको हो। (तिनी हामी सबैका बुबा हुन्‌, १७ जस्तो लेखिएको छ कि: “मैले तिमीलाई धेरै जातिका बुबा नियुक्‍त गरेको छु।”) मरेकाहरूलाई जिउँदो बनाउने अनि अस्तित्वमै नभएका चीजहरूबारे ती अस्तित्वमा भएझैं गरी कुरा गर्ने परमेश्‍वरमा अब्राहामले विश्‍वास राखेका थिए र तिनले उहाँबाटै यो प्रतिज्ञा पाए। १८ आशा गर्ने कुनै ठाउँ नभए तापनि “त्यसरी नै तिम्रो सन्तान पनि असङ्‌ख्य हुनेछन्‌” भनिएबमोजिमै थुप्रै जातिको बुबा हुनेछु भनेर आशा गर्दै तिनले विश्‍वास राखे। १९ लगभग सय वर्ष पुग्नलागेको आफ्नो शरीर अनि साराको गर्भ पनि मरेतुल्य भइसक्यो भनेर थाह भए तापनि तिनको विश्‍वास भने कमजोर हुँदै गएन। २० तर परमेश्‍वरबाट प्रतिज्ञा पाएको हुनाले तिनको विश्‍वास डगमगाएन, बरु परमेश्‍वरको प्रशंसा गर्दै आफ्नो विश्‍वासमा अझ दह्रो भए। २१ अनि उहाँले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो पूरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर पूर्णतया विश्‍वस्त भए। २२ अनि “यसले गर्दा तिनी उहाँको नजरमा असल ठहरिए।” २३ “तिनी उहाँको नजरमा असल ठहरिए” भनेर तिनको लागि मात्र लेखिएको थिएन, २४ तर हाम्रो लागि पनि थियो, किनकि हाम्रा प्रभु येशूलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुहुनेमाथि विश्‍वास राखेको हुनाले हामी पनि असल ठहरिने निश्‍चित छ। २५ हाम्रा पापहरूका निम्ति मारिन उहाँ सुम्पिइनुभयो र हामीलाई असल ठहराउनका निम्ति ब्यूँताइनुभयो।